Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.8 နိဂုံး
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနအသစ်ကလူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပေါ်ပေါက်။ သို့သော်ဤကိစ္စများကျော်လွှားနေကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်, သုတေသီများနှင့်အများပြည်သူအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးထောကျပံ့ဖြစ်ကြောင်း shared ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးနိုင်လျှင်, ထို့နောက်ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှတာဝန်ရှိနှင့်အကျိုးရှိသောဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်များ၏စွမ်းရည်များအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဤအခနျးကြောင့်ဦးတည်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွှေ့ဖို့အကြှနျုပျ၏ကွိုးပမျးကိုယ်စားပြုတယ်, ငါသော့ကိုသင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမှဆက်လက်နေစဉ်အခြေခံမူ-based စဉ်းစားတွေးခေါ်ချမှတ်ရန်သုတေသီများအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။
အပိုင်း 6.2 မှာတော့ငါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပြီသုံးဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်သုတေသနစီမံကိန်းများဖော်ပြခဲ့သည်။ သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ပင်အသိပညာမပါဘဲစောင့်လူတွေပေါ်စမ်းသပ်ဖို့အတှကျလျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာပါဝါ: ထို့နောက်အပိုင်း 6.3 အတွက်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်လူမှုရေးသုတေသနအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမသေချာမရေရာများအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်သောအရာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်း, စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား, ကောင်းတဲ့အ, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား: Next ကို, အပိုင်း 6.4 အတွက်ငါသည်သင်တို့၏အတှေးအချေါကိုလမျးညှနျနိုငျကွောငျးလေးရှိပြီးသားအခြေခံမူဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်အပိုင်း 6.5 အတွက်ငါသည်သင်ရင်ဆိုင်ရအံ့သောငှါ၎င်းအနက်ရှိုင်းဆုံးစိန်ခေါ်မှုများတစ်ဦးနှင့်အတူသငျသညျကိုကူညီနိုငျနှစ်ခုကျယ်ပြန့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်-လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology-အကျဉ်းချုပ်: သင်တစ်ဦး Ethics သင့်လျော်သောအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ Ethics မေးခွန်းထုတ်စရာနည်းလမ်းများယူဘို့ကသငျ့လျြောသညျ့အခါ အဆုံး။ ဤရွေ့ကားအခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်တည်ဆဲစည်းမျဉ်းများကခွင့်ပြုသောအရာကိုအာရုံစိုက်ကျော်လွန်ရွှေ့ဖို့သငျသညျကို enable နှင့်အခြားသုတေသီများနှင့်အများပြည်သူနှင့်သင်၏ဆင်ခြင်ခြင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက် (အပိုင်း 6.6.1), နားလည်မှုနှင့်မန်နေဂျင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ် (အပိုင်း 6.6.2), privacy ကို (အပိုင်း 6.6.3: ကြောင်းနောက်ခံနှင့်အတူ, အပိုင်း 6.6 ၌ငါဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်လူမှုရေးသုတေသီများများအတွက်အထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ကြောင်းလေးဒေသများဆွေးနွေးတင်ပြ ), နှင့်မသေချာမရေရာ (အပိုင်း 6.6.4) ၏မျက်နှာ၌ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပိုင်း 6.7 ၌ငါမတည်မငြိမ်ကျင့်ဝတ်နှင့်အတူတစ်ဦးဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်ဘို့သုံးလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
အတိုင်းအတာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဤအခနျးယေဘုယျအသိပညာရှာဖွေလျက်တစ်ဦးချင်းသုတေသီများ၏ရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်သုတေသန၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှု၏ system ကိုမှတိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုထွက်အရွက်; ကုမ္ပဏီများကဒေတာများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို; နှင့်အစိုးရများကအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို။ ဤရွေ့ကားအခြားမေးခွန်းများကိုသိသာရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲပေမယ့်သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ကနေအိုင်ဒီယာအချို့ကိုဤသူသည်အခြားအခင်းအကျင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါမြော်လင့်သည်။